Kenya ma xeelad hor leh ayay ku wajaheysaa khilaafka kala dhexeeyo Soomaaliya? | Saxil News Network
Kenya ma xeelad hor leh ayay ku wajaheysaa khilaafka kala dhexeeyo Soomaaliya?
Xilli uu weli taagan yahay muranka badda ee u dhexeeyo Soomaaliya iyo Kenya, waxay u muuqataa inay Kenya ay waddo dhaqdhaqaaq ku aadan arrintaas, waxay Kenya muranka badda u gudbisay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya, Monica Juma ayaa waxay booqasho ku tegtay dalka Jabuuti, waxay halkaas kulan kula qaadatay madaxweynaha Jabuuti, Ismaacil Cumar Geelle.
Waxybaaha ay ka wadahadleen waxaa kamid ah ammaanka gobolka iyo xiriirka diblumaasiyadeed ee haatan ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, Maxamed Cali Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo Ismaaciil Cumar Geele ay soo hadal qaadeen xirirka diblumaasiyadeed ee haatan ka dhex taagan labada dal balse wax faahfaahin ah kama uusan bixin.
Kenya waxay muranka badda hor dhigtay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey si xaaladda ay usoo farageliso.
Qaramada Midoobey waxay muranka badda ee labada dal ku sheegtay inay caqabad ku noqon karto amniga gobolka, sida uu ku warramay wargeyska The Standard.
Image captionMonica Juma waxay la kulantay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele
Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ayaa sheegay in Kenya ay dooneyso inay ka faa’deysto kala qeybsanaanta iyo xasilooni la’aanta ka jirto Soomaaliya si wadahadal looga gaaro muranka badda.
“Kenya waxaa ilaa hadda ka dhaadhaacsan in muranka lagu xallin karo wadahadal” ayuu yiri Maxamed Caalin.
Kenya waxay dooneysaa in dalalka gobolka ee xiriirka ka dhexeeyo inay soo dhexgalaan xallinta muranka sii loo afjaro ismari waaga diblumaasiyadeed.
“Kenya waxaad mooddaa in xiriir uu ka dhexeeyo isdhexgal iyo xiriir qowmiyadeed.. marka Jabuuti maadama ay kamid tahay qowmiyadaha soomaaliyeed ee Geeska Afrika, marka waxay isleedahay ama dhexdhexaad ka noqon kartaa arrinta”
Waxaa uu sidoo kale sheegay in Kenya ay dooneyso in cadaadis dhaqaale iyo mid caalami ah ay saarto dowladda Soomaaliya si khilaafka wadahadal loogu dhameeyo.
Kenya waxyaabaha ay tirsaneyso waxaa kamid ah in Soomaaliya ay abaal u gashay balse ay adeegsaneyso siyaasado leh wajiyo kala duwan ayuu yiri Maxamed Caalin.
Dacwadaasi ayaa haatan hortaalla maxkamadda ICJ, waxaana garsoorayaasha ay oggolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadda la xiriirta arrintan, inkastoo Kenya ay marwalba dooneysay in arrintan lagu dhameeyo qaab is-fahan ah oo bannaanka ka ah maxkamadda